China Yakachipa grill mesh fekitori uye vagadziri Jinqu Simbi
Yakachipa grill mambure zvakare zvinoreva kuraswa bhaa mesh, ayo akagadzirwa kwakakurudzira simbi waya.
Yakafukidzwa pamucheto yekucheka mesh yaigona kudzivirira kuitika kwemaoko kukwenya.
Inoshandiswa zvakanyanya muJapan neKorea bhengi zvitoro, izvo zvinogona kuchengetedza basa rekuwachisa uye hupfumi hwekutsiva.
Grill mesh yaigona kuchengetedza chikafu chako pane iyo grill uye kwete kudonha pasi uye inobvumira zvakaenzana zvakagochwa chikafu nguva dzese. Marasha anopisa anoita nyama izere nekunhuwirira kweMarasha.
Chekutanga nhanho: waya yekudhirowa
Nhanho 2. Kurapa kwepamusoro: waya yekusimbisa.
Nhanho 3. Kuruka tambo yakakoswa netambo nemuchina
Nhanho 4. Kucheka kusvika kuRound, mativi kana rectangle mhando uye ita mupendero wakafukidzwa
Nhanho 5. Kupedzisa chimiro
Tsananguro yemutengo wakachipa wegrill
Yakatenderera grill mesh-Flat mhando
Wire dhayamita 0.85mm
Saizi 200mm, 230mm, 237mm, 240mm, 245mm, 250mm, 260mm, 263mm, 270mm, 280mm, 285mm, 300mm, 445mm
Yakatenderera grill mesh- ARC mhando
Saizi 240mm, 260mm, 270mm, 280mm, 295mm, 300mm, 330mm
Yakatenderera grill mesh- Convex mhando
Saizi 330mm, 300mm, 295mm, 280mm, 270mm, 260mm, 245mm, 240mm, 230mm
Square Grill pajira riya
Wire dhayamita 0.9mm, 0.95mm, 1.0mm
Saizi 220 * 220mm, 225 * 225mm, 240 * 240mm, 250 * 250mm, 280 * 280mm, 300 * 300mm
Rectangle Grill pajira riya
Saizi 155 * 215mm, 167 * 216mm, 170 * 305mm, 170 * 330mm, 170 * 392mm, 180 * 280mm, 198 * 337mm, 200 * 300mm, 200 * 330mm, 210 * 270mm, 240 * 300mm, 250 * 450mm, 260 * 390mm, 270 * 175mm, 400 * 300mm, 400 * 350mm, 450 * 185mm
Nzira yekuchenesa sei mafuta kana kabhoni tsvina pane grill mesh?
Tsvaira tsvina uye mira kwekanguva, wozopukuta mafuta kana tsvina nemucheka wakanyorova.
Yedu yekuchera mesh inosanganisira Stainless simbi grill mesh, Round bbq grill mesh, Square barbecue mesh, inoraswa grill waya mesh uye welded grill mesh. Iyo inorasirwa grill mesh ndiyo yakachipa kwazvo.
Isu takange taendeswa kunze kwenyika waya wewaya kuCanada, Australia, Singapore, Malaysia, Argentina, nezvimwe.
Zvese zviri pamusoro zvakakurumbira saizi zviri mune zvakakwana stock, gamuchira maoda ako chero nguva!
Pashure: Disposable rectangle Grill pajira riya
Zvadaro: Marasha Grill Mesh
Bbq Kubika Mesh